के कारण घोषणा गरिँदै छ नेवाः स्वायत्त राज्य ?	के कारण घोषणा गरिँदै छ नेवाः स्वायत्त राज्य ? नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः संर्घष् समितिको तर्फाट आगामी पुस ११ गते नेवाः स्वायत्त राज्यको घोषणाका साथ नेवाः स्वायत्त राज्यको झण्डोत्तोलन गर्ने कार्यक्रम र्सार्वजनिक भइसकेको छ। यसै बीच एनेकपा माओवादीको तर्फाट पनि पुस १ गते नेवाः स्वायत्त राज्यको घोषणा हुँदै छ। माओवादीले आफनो आन्दोलनको दौरान स्वायत्त राज्यहरूको घोषणा गर्न लागेको हो र यो समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्ने नभई प्रचारात्मक नै मात्र हो भनेको छ। तर मंकाः संर्घष्ा समितिको तर्फाट गरिन लागेको नेवाः स्वायत्त राज्य घोषणाको उद्देश्य र उपादेयता के हो – यसबारे चर्चा हुन आवश्यक भएको छ।
माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार मगरात स्वायत्त राज्य भनेको इतिहास र भूगोल समेटेको मगरातको भू-भाग हो, मगरको जातीय राज्य होइन । मगरात स्वायत्त राज्यभित्र रहेका सबै जातजातिले समानुपातिक ढंगले राज्यको अधिकार र उपभोग गर्न पाउँछन् । एमालेले स्वायत्तता र स्वशासनबारे आधिकारिक व्याख्या गरेको छैन ।
नेपालका आदिवासी ः नेपालमा संघीय राज्यहरू जातीय, भाषिक र क्षेत्रको आधारमा संरचना हुने भएपछि ‘को आदिवासी र को अन्य’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ५९ वटा जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेको छ । यसमा अरू जातिले आफूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका छन् र सरकारले यसबारे कार्यदल पनि बनाएको छ ।